Christian Song | जीवन गवाही | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
Christian Song | जीवन गवाही
केन्द्र सरकारले सबै धर्मलाई प्रतिबन्ध लगाउने आदेश जारी गरेको छ,
विशेष गरी सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डलीलाई।
प्रतिबन्ध फिर्ता नहुञ्जेल सिपाहीहरू फर्कनेछैनन्।
तैँले के गर्न लागेको?
राष्ट्रले घोषणा गरेको छ
तीन वा त्योभन्दा धेरै मानिसहरू भेला हुनु गैरकानुनी हुन्छ।
र यसले सामाजिक सुव्यवस्थालाई खलबल्याउँछ।
“आखिरी दिनहरूका ख्रीष्‍टले जीवन ल्याउनुहुन्छ,
अनि सत्यको नित्य रहने र अनन्‍त बाटो ल्याउनुहुन्छ।
मानिसले जीवन प्राप्त गर्ने मार्ग यही सत्य नै हो,
र यो एक मात्र मार्ग हो जसद्वारा मानिसले परमेश्‍वरलाई चिन्‍नेछ
र परमेश्‍वरद्वारा स्वीकार गरिनेछ।”
थुक्क! यसपटक तँलाई आठ वा दस वर्षका निम्ति जाकिनेछ।
अनि हेरौंला, तैँले अझै परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छस् कि गर्दैनस्!
एक दिन मैले परमेश्‍वरको गवाही दिएको कारण मलाई पक्राउ गर्न सक्छन्।
यो कष्ट-भोग धार्मिकताको खातिर हो भन्‍ने मलाई हृदयमा थाहा छ।
यदि मेरो जीवन एक पलमै समाप्त भयो भने,
मलाई अझै मैले यो जीवनमा ख्रीष्‍टलाई पछ्याउन र उहाँको गवाही दिन सक्छु भन्‍नेमा गर्व हुनेछ।
यदि म राज्यको सुसमाचार फैलिएको नपाई मरेँ भने पनि,
म अझै सुन्दर शुभकामना दिनेछु।
यदि मैले राज्य पूरा भएको दिन देख्‍न पाइन,
तर आज शैतानलाई लाजमा पार्न सकेँ भने, मेरो हृदय आनन्द र शान्तिले भरिनेछ, हो भरिनेछ।
परमेश्‍वरका वचनहरू सारा संसारभरि फैलिन्छ र मानिसको बीचमा ज्योति आएको छ, आएको छ।
ख्रीष्टको राज्य आपतको बीचमा खडा हुन्छ र स्थापित हुन्छ।
अन्धकार हटेर जान लाग्यो, धर्मी बिहानी आएको छ।
समय र वास्तविकताले परमेश्‍वरको गवाही दिएको छ।
यदि एक दिन मैले शहादत प्राप्त गरें र परमेश्‍वरको लागि उप्रान्त गवाही दिन नसक्‍ने भएँ भने,
अनगिन्ती सन्तहरूले राज्यको सुसमाचार डढेलो झैँ फैलाउनेछन्।
यो अप्ठ्यारो बाटोमा म कति टाढासम्‍म हिँड्न सक्छु भन्ने मलाई थाहा नभए पनि,
म परमेश्‍वरको लागि गवाही दिनेछु र परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्ने मेरो हृदय चढाउनेछु।
मैले ख्रीष्‍टको लागि घोषणा गर्न र गवाही दिन समर्पित हुने सौभाग्य पाएको छु।
म त परमेश्‍वरको इच्‍छा पूरा गर्न र ख्रीष्टको देखा पराई र कार्यको गवाही मात्रै दिन चाहन्छु।
आपतको डर नै नमानी, भट्टीमा खारिएको शुद्ध सुन जस्तै,
शैतानको प्रभावबाट निस्कँदै, विजयी सेनाहरूको झुण्ड देखा पर्छ।